Nidaamyada faylka: midkee ayaa loo doortaa qashinkayga iyo qormooyinkayga Linux? | Laga soo bilaabo Linux
Hadda, Nidaamyada hawlgalka bilaash ah oo furan ku saleysan GNU / Linux taageeraan tiro balaadhan oo ah Nidaamyada faylka (faylasha), inkasta oo ay macquul tahay ta ugu fiican ee la yaqaan iyo / ama la isticmaalay, haddana waa tan hadda jirta EXT4.
Laakiin dhab ahaantii: Muxuu noqonayaa midka ugu habboon isticmaalka aan siinno Qeybahayaga, Cajaladaha, Nidaamyada Howlgalka ama Kumbuyuutarradeena? Waa maxay faa iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka mid ka haysto kan kale?
Sidaan horeyba u sheegnay kahor, inta badan la isticmaalo uguna macquulsan Nidaamka faylka ku saabsan GNU / Linux, hadda noqo EXT4. Tan waxaa ugu wacan:
"... el Nidaamka faylka la dheereeyay (EXT), wuxuu ahaa nidaam faylkii ugu horreeyay ee si gaar ah loogu sameeyay Nidaamka Howlgalka Linux. Waxaa loogu talagalay Rémy Card si looga gudbo xaddidaadda Nidaamka Faylka ee MINIX. Waxaa laga beddelay labadaba EXT2 iyo Xiafs, oo ay ka mid ahaayeen tartan, oo ext2 aakhirkii guuleystey, sababtoo ah jiritaankiisa muddada dheer.".
Taasi waa, ka Nidaamka faylka EXT, waad ku dhowdahay 30 sano isbeddelaya. Ka soo nooca 1 ee 1992, dhex maraya kiisa nooca 2 ee 1993uu nooca 3 ee 2001, ilaa casriga ah Nidaamka faylka EXT4 taasi waa la sii daayay sanadkii 2008. Dhanka kale, wixii markaa ka dambeeya, Nidaamyo kale oo Faylal ah oo badan ayaa u arkay nolosha beddelka tan hadda jirta EXT4 leh astaamo caan ah iyo kala duwanaansho.
1 Nidaamyada faylka ee GNU / Linux
1.4 Kuwa kale adeegsi yar ama la yaqaan
Nidaamyada faylka ee GNU / Linux
Marka xigta waxaan arki doonaa astaamaha ugu cajiibka badan mid walba, si markaa loo xuso taas oo aad ugu habboon xaalad kasta oo gaar ah.
Waxaa lasii daayay sanadkii 2008.
Magaceedu wuxuu u taagan yahay Nidaamka faylasha ee afaraad.
Marka loo barbardhigo jirkii hore ee EXT3 way ka dhakhso badan tahay, taas oo ah, waxay leedahay horumar xagga xawaaraha akhriska iyo qorista ah, una nugul jajabka. Sidoo kale, waxay awood u leedahay inay maamusho nidaamyada faylasha ee waaweyn (illaa 1EiB = 1024PiB) iyo inay maamusho faylasha waaweyn (illaa 16TB). Sidoo kale, waxay bixisaa macluumaad taariikhda saxda ah ee faylka ah, waxay leedahay adeegsiga processor-ka hooseeya.
Waxay ahayd tii labaad ee taxanaha 'EXT' inay noqoto Nidaam Fayl-gal ah, oo ah, waxay leedahay farsamo fulisa macaamil ganacsi ama qoraallo joornaal ah, si loogu kaydiyo macluumaadka lagama maarmaanka u ah soo celinta xogta ay saamaysay macaamilku markay dhacdo in taasi ay fashilantay.
Waxay leedahay taageero "Dheeraad ah". "Extent" waa beddelka nidaamka xannibaadda dhaqameed ee ay adeegsadeen nidaamyada faylasha EXT 2/3. "Dheeraad" waa xirmooyin isku xiran oo isku xiran, oo Nidaamka Faylka siiya awood uu ku hagaajiyo waxqabadka marka uu la shaqeynayo feylasha waaweyn isla markaana yareynayo kala-jajabka.
Kuwani iyo qaababka kale waxay ka dhigayaan mid ku habboon in lagu isticmaalo kombiyuutarada guriga iyo dadka isticmaala xafiiska, oo aan u baahnayn adeegsiga degdegga ah ee Nidaamka Faylka. Astaamahiisa wanaagsan iyo shaqadiisa ayaa ku filan tirada ugu badan ee isticmaaleyaasha iyo isticmaalka kombuyuutarka celcelis ahaan loo isticmaalo, taas oo ah, kuwa caadiga ah. In kastoo, adeegsiga loo adeegsado server-yada leh dalab hoose ama hawlgal sidoo kale waa mid aad u fiican.
Waxay leedahay astaamo badan oo aad u fiican, laakiin kuwani waa lagu ballaadhin karaa bogga internetka ee kernel.org, iyo maqaal gaar ah oo ku saabsan bogga opensource.com.
XFS waa kan ugu da'da weyn nidaamka faylasha joornaalka ee loo heli karo barxadda UNIX. Waxaa abuuray shirkadda SGI (oo horay loo oran jiray Silicon Graphics Inc.) waxaana la sii daayay 1994. Bishii Meey 2000, SGI waxay sii deysay XFS iyada oo loo marayo rukhsad furan oo furan, taas oo u oggolaatay in lagu daro Linux oo laga soo qaatay nooca 2.4.25. XFS waxay taageertaa nidaamka faylka illaa 9 exabytes, oo loogu talagalay 64 jajab iyo 16 terabytes oo loogu talagalay 32 jajab.
XFS waa nidaam feylal ah oo fuliya joornaalnimada, iyo sidoo kale xoog leh oo aad u sarreyn kara 64-bit. Gabi ahaanba waa kordhin ku saleysan, sidaa darteed waxay taageertaa faylal waaweyn iyo nidaamyo feylal aad u ballaaran. Tirada feylasha ee nidaamka XFS ku jiri karo ayaa ku kooban kaliya boosaska laga heli karo nidaamka faylka.
XFS waxay taageertaa joornaalada metadata, taas oo sahleysa ka soo kabashada degdegga ah ee shilalka. Nidaamyada faylasha ee XFS sidoo kale waa la jajabin karaa lana ballaarin karaa inta la rakibay oo firfircoon.
Kuwani iyo qaababka kale waxay ka dhigayaan mid ku habboon in loo isticmaalo Servers, gaar ahaan dalab badan ama hawlgal, oo u baahan adeegsi adag oo Nidaamka Faylka iyo habab aad u adag oo loogu talagalay soo kabashada isla iyo xogta ku jirta. Si kale haddii loo dhigo, Servers-ka wax ka qabta culeyska akhriska / qorista, noocyada keydka macluumaadka ama maareynta hawlgallada websaydhka la wadaago, iyo barnaamijyada kale.
Waxay leedahay astaamo badan oo aad u fiican, laakiin kuwani waa lagu ballaadhin karaa bogga internetka ee redhat.com, iyo maqaal gaar ah oo ku saabsan bogga en.qwe.wiki.
Btrfs (B-Tree FS) waa nidaam faylal casri ah oo loogu talagalay Linux kaas oo ujeedkiisu yahay in lagu hirgeliyo astaamo horumarsan iyada oo isla markaa diiradda la saarayo dulqaadka cilladda, hagaajinta iyo maamulka fudud.
Waxaa si wada jir ah u soo saaray dhowr shirkadood, laakiin wuxuu ruqsad ka haystaa shatiga GPL wuuna u furan yahay cid kasta inay wax ku darsato.
Waxay leedahay astaamo aad u fiican oo lagu maareeyo kaydinta waaweyn, iyo soo ogaanshaha, dayactirka iyo dulqaadka khaladaadka ku jira xogta ku keydsan diskiga.
Waxay u maamushaa keydinta qaab isku dhafan, sidaas awgeedna u oggolaaneysa inay bixiso shaqo-la'aan nidaamka faylasha la hirgeliyey.
Btrfs waxay adeegsaneysaa shaqeynta Nuqul-ku-qorid (CoW), waxay u oggolaaneysaa sawir-qaadashada keliya ama wax laga beddeli karo, waxaa ka mid ah taageerada waddaniga ah ee nidaamyada faylasha qalabka badan leh waxayna taageertaa maaraynta mug-hoosaadka Intaa waxaa sii dheer, waxay ilaalisaa macluumaadka (xogta iyo metadata) iyadoo loo marayo jeegagga (Hubin), waxay taageertaa riixitaanka, ku habeynta diskiyada SSD, xirxirida feylasha yar yar iyo kuwa kale oo badan.
Koodhadhka Btrfs wuxuu wali kujiraa horumar isdaba joog ah si loo hubiyo inuu ahaado mid xasiloon oo dhaqso badan, waana la isticmaali karaa xaalad kastoo jirta. Xawligiisa degdegga ah ee horumarku wuxuu ka dhigan yahay inuu si aad ah ugu sii fiicnaanayo nooc kasta oo cusub oo Linux ah, sidaa darteed waxaa si weyn loogu talinayaa in dadka isticmaala ay maamulaan kernel-ka ugu dambeeya ee suuragalka ah haddii ay fulinayaan.
Kuwani iyo qaababka kale waxay ka dhigayaan mid ku habboon in loo isticmaalo Goobaha Shaqada iyo Adeegga sare. Tan iyo markii, waxay u taagan tahay awoodeeda aad u fiican, gaar ahaan kuwa horumarsan ee, guud ahaan, lagu jiheeyo si ka sii fudud hagaajinta waxqabadka, taasi waa, waxay diiradda saarayaan maaraynta keydinta iyo amniga.
Waxay leedahay astaamo badan oo aad u fiican, laakiin kuwani waa lagu ballaadhin karaa bogga internetka ee kernel.org, iyo maqaal gaar ah oo ku saabsan bogga elpuig.xeill.net.
Kuwa kale adeegsi yar ama la yaqaan
Naso, GNU / Linux si buuxda ama qayb ahaan u maamuli karto mid kale Nidaamyada faylasha ee aan u dhalan, waayo, saxannada iyo qormooyinka sida FAT32, exFAT iyo NTFS de Windows, HFS + iyo AFS de Apple. Nidaamyada faylka F2FS, UDF ku xigta exFAT loogu talagalay dibedda ama kaydinta walxaha (disk). Iyo shabakadaha, sida NFS (waxaa loo isticmaalaa in lagu wadaago ilaha u dhexeeya mashiinada Linux) ama SMB (si loo wadaago ilaha u dhexeeya mashiinnada Linux iyo Windows).
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan «Sistemas de archivos», kuweenna «Distros GNU/Linux» inaan si fiican u ogaanno midka saxda ah ee kanyaga ah «discos o particiones», noqo mid dan weyn iyo dan u leh, dhammaan «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Nidaamyada faylka: midkee ayaa loo doortaa qashinkayga iyo qormooyinkayga Linux?
Laakiin waxaan u xiisay faallooyin ku saabsan awoodda "dib u cabbirka" beddelidda qaybaha.
XFS iyo BTRFS lama ogola
Hadda waxaan isticmaalaa XFS iyo EXT4, faa iidada XFS ee iga dhigaysa inaan isticmaalo waa xagaaga kuleylku inuu saameyn yar ku yeesho - waxaan ku baabi'in jiray qeybta ugu qorista badan kuleylka xagaaga iyo tan iyo markii aan u beddelay XFS mar dambe -
Laakiin EXT4 awooddeeda ah inay "cabirto" iyo waxqabadkeeda oo aan ka fogayn kuwa kale ayaa kasbaday qalbigayga
Waad salaaman tihiin, Miguel. Waad ku mahadsantahay faallooyinkaaga iyo talooyinkaaga khibradaada shaqsiyeed!
Xaaladdayda, waxaan u isticmaalaa BtrFs qaybta xididdayda, iyo XFS qaybtayda / gurigayga.
Midka koowaad, waxaan jeclahay awooda aan haysto, oo ay weheliso snapper, inaan dib ugu noqdo gobol hore haddii wax cusbooneysiin ah ama "fiddling" ah ay qaldamaan.
Ku jawaab dhouard
Waad salaaman tihiin, Dhouard. Waad ku mahadsantahay faallooyinkaaga iyo talooyinkaaga khibradaada shaqsiyeed!
Alfonso Barrios D. dijo
Daabacaad aad u wanaagsan laakiin aniga waxay ila tahay haddii aad waqti siiso inaad sharaxdo faa'iidooyinka nidaamyada faylka Linux waxaad sidoo kale faahfaahin kartaa faa'iidooyinka daaqadaha iyo nidaamyada faylka tufaaxa
Inta kale runtii aad ayaan uga helay qoraalka, si aad u wanaagsan ayaa loo qoray
Jawaab Alfonso Barrios D.
Waad salaaman tihiin, Alfonso. Waad ku mahadsantahay faalladaada. Xaqiiqdii, ma aysan aheyn wax xun in lagu daro iyaga. Xaqiiqdii waxay noqon doontaa cusbooneysiinta soo socota ee boostadan.
Haweenka, Barnaamijka Bilaashka ah iyo Isha Furan: Farxad 8-da Maarso!
Cilad ayaa laga helay pppd kaas oo loo oggol yahay inuu meel fog ka fuliyo koodhka xidid ahaan